I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika wePhenylpiracet
/Blog/garari/I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika we -Phenylpiracet
Posted on 09 / 12 / 2018 by 阿斯劳 akanyora garari.
Phenylpiracetam is derivative phenyl ya nootropic drug piracetam. Inowedzera kushanda kwemuviri uye inomutsa chiremera chekuregererwa kunotonhora nekushushikana. Kutsvakurudza kwemhuka kwakaratidza antiamnesic, antidipressant, anticonvulsant, antipsychotic, anxiolytic uye kukurudzira kukurudzira zvinokonzerwa. Inofungidzirwa segadziri inogadzirisa uye iri pane doping list. Yakagadziridzwa muZ1980 muRussia zvichida kwekushandisa zvechiuto uye nemitambo.
Phenylpiracetam mamwe mazita
Chimiro chemaumbi C 12 H 14 N 2 O 2
CAS nhamba 77472-70-9
Maumbirwo echimiro chemukomboni ane maomeri maviri: S naR. Zvese zvine maitiro akanaka kune iyo psyche seanodzvinyirira. Nekudaro, iyo R-isomer yakasimba, nekuti, kusiyana neiyo S-fomu, inowedzera inokanganisa mabasa senge ndangariro uye kutaura. Inoita kuti kubatana kweveuropi kuuropi, kunatsiridza kusangana kweRNA, inopa iro rakanakisa reropa Iko kune zvakare fomu yechitatu ye phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Icho musanganiswa werudzi rwemasomeri ese, ayo anosanganisa zvivakwa zvavo. Parizvino, iyo yakachena R-isomer yemushonga haina kuwanikwa yekutengesa. Naizvozvo, chenjera kana iwe ukatenga phenylpyricetam ichave isina simba mhedzisiro. Kana iyo muyero wakakwana, saka pamwe iyi ndiyo S-fomu yemubatanidzwa. Zvigadzirwa zvedu zvine SR-fomu, uye ine zvese zvakanakira mushonga.
Phenylpiracetam General tsanangudzo
Ive yakashandiswa mumunhu sechirudziro cheNCS, iyo yakagadzirisa nzira, mitambo yemitambo uye seanotropic, pane iyo iyo iyo 30-60 nguva dzinopfuura piracetam. Zvidzidzo zvezvipfuwo zvinoratidza antiamnestic, antidipressant, anticonvulsant, antipsychotic, anxiolytic uye kukurudzira kuita basa.
Mashomanana zvidzidzo zvekliniki zvishoma zvakaratidza kushamwaridzana kusinganisa pakati pezvinyorwa zve carphedone nekuvandudzwa kwemamiriro ezvinhu encephalopathic, zvakadai sezvipembenene zveutachiona hweropa, craniocerebral trauma uye mamwe marudzi e glioma.
Inoderedza kushungurudzika kwebhenzodiazepine diazepam, inovandudza mufambiro wechechi, inoderedza mushure-rotational nystagmus, inodzivirira kudzoserazve marwadzo, uye ine antiticonvulsant properties.
Zvichida, phenylpyracetam inogona kunzi imwe yemasimba emasimba nootropic enguva yedu. Yakagadzirwa chaizvo kuitira simba rakasimba pazvirwere zvakakomba zvinosangana nekukanganisa ndangariro, kutaura, kana kubatana kwekufamba. Phenylpyracetam kazhinji yakawedzera fomura, inozivikanwa kubva panguva yeSoviet Union yezvinhu inonzi "pyracetam." Kuwedzerwa kweboka re phenyl kwakabatsira mukuvandudzika kwemishonga yemishonga (semuenzaniso, kupinza kwakanyanya kubudikidza neropa-brain barriers), inoita kuti ive nesimba uye nekukurumidza.
Phenylpiracetam powder Kubatsira uye dhizi
Nootropin phenotropil (phenylpyrazetam) mu capsules ine chiito chinotevera:
• inoita basa reuropi;
• kunowedzera kusangana kwemagariro;
• inokurumidza kufambisa nzira yekuendesa mafungiro emutsipa mukati mehutano hwemagetsi;
• kunowedzera kushanda muviri;
• kunowedzera mafungiro;
• kunowedzera kusagadzikana kunetseka;
• inokurudzira kudzivirira;
• inovandudza maziso uye kuwedzerwa kweropa (kunyanya zvikamu);
• ane anti-inflammatory and analgesic effects nevamwe.
Nhamba yezvinhu zvakasiyana kubva ku100 kusvika ku250 milligrams pazuva pamwedzi, mushure mokunge kupera kwemazuva 30 kuchifanira kuitwa. Phenylpyracetam haina kukonzera kusvuta uye kubvisa zviratidzo.
Phenylpiracetam powder - Side mhedzisiro uye zvinopesana
Pakati pemigumisiro inogona kuonekwa yakasimba yekushushikana kwepfungwa. Panogona kuva nekushaya hope kana iwe ukatora chinhu ichocho shure kwe4 pm, saka inofanira kunge yakadhakwa mangwanani. Vanhu vanowanzokwanisa kuwedzerwa ropa, inogona kukura zvikuru, saka munyaya iyi, iwe unofanira kutora chinhu chacho nekuchenjerera. Izvo zvinopesana nekushandiswa kwechinhu chacho ndezvokusawirirana.
Ongororo pamusoro pePhenylpiracetam
Ongororo pamusoro pemapirisi e phenotropil (phenylpyrazetam) haana musoro. Nenzira yakawanda, vanhu vanotora mishonga iyi vane ruzivo rwekuwedzera simba, vivacity, kuvandudza kurara, kurangarira uye mafungiro, kuwedzera kwekufungidzirwa. Vamwe vanhu, pane zvinopesana, vakataura kuti vakakundwa nekunzwa kugona uye kushaya simba. Inofanira kutarirwa mupfungwa kuti kupindura kwakadai kunowedzera nekuda kwekuneta zvakanyanya, kushungurudzika uye kupera mupfungwa. Hazvikurudzirwi kutora phenylpyracetam pasina kusarudzwa kwechiremba.
Phenylpiracetam Inobudirira Here?
Kana mushonga wacho uchitaridzwa mune doping list, zvinonzwisisika kufunga kuti inoshanda. Pano pano inoshanda chete kwenguva yakati. Hongu, iwe uchaita zvakawanda. Uye chii chinoitika pashure pezuva re2? Chinokosha ndechokuti simba uye basa rakawedzerwa kune inowanzoitwa nootropil, kana ndikataura kudaro. Uye nootropil (kureva, piracetam) inotanga kuita shure kwevhiki dzinenge 2. Icho chinotarisa kuti mhedzisiro yekutora phenotropil, isu tinoreva kuti chaiyo inoita nharo, inotanga mumazuva 14. Asi kwaari iwe uchawana mutero we2-vhiki we vivacity. Zvisinei, kushivirira, kukanganisa kumishonga (inonyanya kuzivikanwa neboka rinoshandiswa) rinokurudzirwa, saka kushandiswa kwaro kwenguva refu hakurevi.
Phenylpiracetam (Carphedon) powder Nhamba, kuchengeteka, zvakadini zvokunwa.
Tinotenda kuti kunyangwe ukaudzwa sei kuti "mushonga wacho wakachengeteka zvachose," hatikurudzire kushandiswa kwawo kweanopfuura mavhiki matatu, naivowo vanokunetesa nekuda kwemaurotransmitter anoshanda nekumhanyisa. Muchokwadi, mune kwedu maonero, zvakanakisa kushandisa phenotropic episodically, kana makosi evhiki 3-2 uye kuitisa se "Turbo Mode".
Kuti uwane nootropic action, sezvatotaurwa, zvinodiwa kunwa zvisingaiti semavhiki e2 pamusoro apa. Pamusoro pepurasitiki uchaona kuti yakatorwa kusvika kumwedzi ye3, clevermind.ru inozviona, chete, kutengeserana, sezvo mutengo wechishamiso ichi ndeye 800 rubles (pakuguma kwe2014). Saka, kugamuchirwa kwemavhiki e3:
Yakave yakaedzwa kuti kuyerwa kwemunhu kunoita basa rakakosha kana uri pasi pe 70 kg: 1 piritsi (100 mg) mangwanani ega ega, kana pasina zvinoitika, wobva wawedzera imwezve, kana panguva imwe chete, kana mumaawa 2-3. .
Iwe uri kupfuura 70 kg: tanga ne 1st, ipapo iwe uchazoshandura ku 2 kana kunyange 3 pazuva.
Carphedon powder Zvinotora nguva yakareba sei kuti zviitike?
Chirwere ichi chine zviito zve2 pachiyero chezviitiko:
1. Mukati me5-6 maawa. Makara akajeka, simba, kusungwa. Iko hakuna euphoria, iwe unozonzwa kuunganidzwa uye kutsunga, asi izvi uchazvinzwisisa chete kana maitiro emushonga apera. Iyo nguva iri pakati pe "funga-ku-ita" inoonekwa ipfupi, uye panguva ino zviri nani kuti usakanganisa. Kutaura kunowedzera kukurumidza, ini ndoda kutaura nezve zvese, asi kana pasina dzimwe nzeve, saka verenga, nyora, chirongwa, pakupedzisira. Chimwe chiitiko chinonakidza - ndinoda kuti munhu wese ataure nekukurumidza kana kuti iwe uverenge bhuku nekukasira zvekuti unodya mamwe mazwi. Vatambi vanofarawo.
2. Mukati me 10-14 mazuva. Ndangariro uye wit zvakagadziridzwa zvishoma, sezvazviri neyakajairika nootropics. Chiedza FullHD zviroto zvinobviswa, saka unogona kudzidzira "kutungamirirwa zviroto".
Ndeipi nguva yekumirira kuitika?
Mushure memaminetsi makumi maviri nemakumi matanhatu, zvinoenderana neyako metabolism (metabolism). Nootropic mhedzisiro - mushure memazuva 20-60.
I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika weArmodafinil	8 mibvunzo kuzvibvunza iwe usati watora Cetilistat powder